Xaalada Wadanka Soomaaliya iyo Sawirada uu Asbuucan Ku Cabiray Farshaxamiiste Amin Arts Hoos Ka Ka Daawo Kuwo Kaloo Badan | buqaqable.net
Madaxweyne Putin waxa uu la tartamayaa 6 murashax, hase yeeshee midkoodna halis muuqata kuma hayo, iyada oo la filayao in Putin uu helo in kabada 50% codadka doorashada, hase yeeshee kooxdiisa doorashadu waxa ay rajeynaysaa in uu ku guuleysto 70%
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa mar kale ku celiyey inuu oggol yahay in la dhagaysto codna loo qaado mooshinka isaga ka dhanka ah ee ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah xildhibananada Baarlamaanku.
Barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Faarax Aw-Maxamuud Maxamed oo qoray buug oo af-Soomaali iyo af-Ingiriisi ku qoran
ONLF ayaa mar kale ku baaqay in si nabad ah lagu sii daayo Cabdikariim Muuse Qalbi-dhagax oo horey dawladda Soomaaliya ugu gacangelisay Itoobiya, iyada oo ururku sheegay in sii dayntiisa lagu xiray shuruudo ay ka mid tahay inuu ka laabto mowqifkiisa siyaasadeed.
Magaalada Muqdisho waxa ku yaalla xarrun ka taageerta tababarka xirfadda ardada soo dhameysata barashada caafimaadka.
Xaalada Wadanka Soomaaliya iyo Sawirada uu Asbuucan Ku Cabiray Farshaxamiiste Amin Arts Hoos Ka Ka Daawo Kuwo Kaloo Badan
Posted on April 8, 2010 by Buqaqable.net
« Al Qaeda Members land in Somalia From Yemen: Government Our intelligence Shows 12 Senior Al Qaeda Officials Came into Somalia From Yemen in The last Two Weeks," Said Somali Treasury Minister Abdirahman Omar Osman, مأساة الشعب الصومالي القديمة الجديدة يصعب على المرء في القرن الواحد والعشرين أن يستوعب ويدرك كامل الإدراك مايدور في الساحة الصومالية من مآسي وأضطرابات وتنقضات الاّ اذا درس المرء مسبقا تاريخ القرون الوسطى فهناك تشابه بالعقول . »
Bile jaamici, on May 17, 2012 at 11:18 said:
Aniga waxan taagersanahay farmaajo
Ciidamada dowladda Suuriya ayaa duulaankooda ka dhanka ah goobaha ay ka taliyaan fallagada ee bariga Quuda waxa ay cadaadis xooggan ku sii saarayaan deegaanadaasi.
Madaxweynaha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay dagaalka dowladda Turkiga ay ku qabsaneyso magaalada Afrin ee dalka Suuriya ayaa waxaa uu sheegay in xooggag taabacsan dowladda Turkiga ay la waregeen magaalada Afrin oo xarun u aheyd Kurdiyiinta Suuriya.
Wakiillo ka kala socda waddamada kuuriyada woqooyi, mareykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay kulan ku yeeshaan dalka Findland.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa sheegaya in khubaro caalami ah oo ku takhasusay hubka kiimikada ay isniinta soo socota baaritaanno ku sameyn doonaan suntii loo adeegsaday in lagu sumeeyo Sergei Skripal oo ka tirsanaan jiray sirdoonka Ruushka iyo gabar uu dhalay.
Warbaahinta Mareykanka ayaa kusoo warantay in warqadani sirta ah ay sii xoojin karto wararka sheegaya in madaxweyne Truymp uu baal maray sharciga.
Isbahaysiga talada haya ee Itoobiya ayaa la filayaa in ay goor dhow kulmaan si ay u doortaan hogaamiyohooda xiga.
Dadweynaha Ruushka ayaa maanta oo axad ah u dareeray goobaha codbixinta, xili dalkaasi ay ka dhaceyso doorashada madaxtinimada.
Milateriga dowladda Ruushka waxaa uu sheegay in dadka rayidka ah ay isaga qaxayaan bariga magaalada Quuta. Inkabadan shan kun oo qof ayaa lagu soo warramay in maanta oo axad ah ay isaga qaxeen bariga magaaladaasi.